Budata CFG Football App maka gam akporo [ngwa kacha ọhụrụ] - Luso Gamer
Nbudata CFG Football App maka gam akporo [ngwa Kacha ọhụrụ]
January 13, 2022 by John Smith
N'ime ụdị egwuregwu egwuregwu, a na-ewere bọọlụ ka egwuregwu kacha hụ n'anya na egwuregwu n'ụwa niile. Taa ebe a anyị wetara nnukwu ohere a maka Fans. Ugbu a ịwụnye CFG Football App ga-enyere aka ịzụta ngwaahịa bọọlụ dị iche iche.
Ngwaahịa ndị ahụ gụnyere ngwa Ọzụzụ, Ngwaahịa bọọlụ, bọọlụ, egwuregwu na ndị ọzọ. Usoro nke ịzụta ihe ndị ahụ dị nnọọ mfe. Ewezuga ịzụrụ ihe dị iche iche, ngwa a na-akwado atụmatụ ịkụ nzọ n'ịntanetị.
Ee, ugbu a ndị ọrụ gam akporo nwere ike nweta ezigbo uru ịkụ nzọ n'ịntanetị. A na-ewere usoro nke irite uru na usoro aghụghọ. Ma ebe a anyị ga-akọwa niile aghụghọ na nzọụkwụ nkenke. N'ihi ya, ị nwere mmasị na njikere ịnụ ụtọ ohere na-adịghị agwụ agwụ wee tinye CFG Football Malaysia App.
Kedu ihe bụ CFG Football Apk
A na-ahụta CFG Football App dị ka ụlọ ahịa egwuregwu n'ịntanetị ma ọ bụ ikpo okwu. Ebe a na-ahapụ ndị otu debanyere aha ka ha zụta ma ree ngwaahịa bọọlụ dị iche iche. Ndị ahụ gụnyere bọọlụ, egwuregwu, ngwa ọzụzụ, akpụkpọ ụkwụ, uwe elu na ndị ọzọ.
Ndị ọkachamara kwenyere na ha gbakwunyere usoro azụmahịa ịntanetị a dị nro. Nke ahụ na-enye ndị ọrụ ohere ịzụta ngwaahịa dị iche iche ozugbo n'egbughị oge. Ọzọkwa, ndị na-ere ihe dị iche iche nwere ike nweta ezigbo ọrụ.
Ga-ahọrọ nke a Nweta App ikpo okwu n'ihi na ọrụ na-ere ihe dị ukwuu karịa ka a tụrụ anya ya. Cheta na ngwa na-enye dị iche iche bonuses n'elu-emezu ebumnuche. Nke pụtara na ohere inweta ohere na-abawanye nke ukwuu.
Naanị budata ụdị CFG Football Android kachasị ọhụrụ. Mgbe ahụ iwekota n'ime Android smartphone iji ochie kpochapụwo usoro. Ozugbo echichi zuru ezu, ugbu a nweta isi dashboard wee nweta ezigbo uru.
Ozi nkowa mgbakwunye APK
aha CFG bọọlụ
size 15.50 MB
Aha ngwugwu com.footballbuysxc.ụlọ ahịa
Achọrọ gam akporo 4.0.3 na gbakwunyere
Category App - Egwuregwu
Ewezuga ire na ịzụrụ ọtụtụ ngwaahịa, ngwa a na-ewu ewu maka ịkụ nzọ n'ịntanetị. Ee, a na-ahapụ ndị otu edebanyere aha ka ha nzọ ma nweta ezigbo ego. Usoro nke ịkụ nzọ dị mfe, naanị họrọ egwuregwu egwuregwu nke onye ofufe dị njikere ịkụ nzọ.
Họrọ ndepụta ọkpụkpọ wee zọ nzọ otu a na-enyocha arụmọrụ. Iji mee ka usoro a bụrụ enyi na enyi, a na-agbakwunye ngwa mgbakwunye a na-asụ ọtụtụ asụsụ. Nke ahụ na-enyere aka ịtụgharị asụsụ ngwa ka ọ bụrụ asụsụ mba ụwa dị iche iche.
Asụsụ ndị a kacha akwado bụ Bekee, Malay, French, Hindi na ndị ọzọ. N'ịtụle azụmahịa dị mma na nwepụ, a na-agbakwunye usoro ịkwụ ụgwọ echekwara dị elu. Ma otu ego azụmahịa bụ 2% maka ndị otu.
Ndị na-adịghị aga n'ihe gbasara ego nwekwara ike nweta ọrụ dị mma maka ịkpọ ndị enyi. Ee, ndị mmepe na-akụnye nhọrọ ahịa mmekọ a. Ugbu a iji otu nhọrọ, ịkpọ ndị enyi a ma ama ga-enye ọrụ dị iche iche.
Ọ bụ ezie na ndị mmepe na-eme atụmatụ ịgbakwunye atụmatụ adịchaghị ndị ọzọ dị iche iche. Nke ga-enyere ndị otu debanyere aha aka inweta ezigbo uru ozugbo. N'ihi ya, ị dị njikere inyocha ohere ndị a ga-enweta ga-etinyerịrị CFG Football App Download.
Isi ihe dị na Apk
Faịlụ ngwa bụ n'efu ibudata.
Ịwụnye ngwa na-enye nhọrọ ịzụrụ n'ịntanetị a.
Ngwaahịa gụnyere bọọlụ, egwuregwu, ngwa ọzụzụ na ndị ọzọ.
Ndebanye aha bụ iwu.
Enweghị ndenye aha dị elu achọrọ.
A machibidoro mgbasa ozi ndị ọzọ iwu.
Ndị mmepe gbakwunyekwara ịkụ nzọ n'ịntanetị.
Ee, ugbu a nzọ ego wee nweta uru.
Nhọrọ ịkpata mmekọ dịkwa.
N'ime imecha ndị mmekọ ga-enyere aka nweta ezigbo ọrụ.
Ngwa interface dị mfe.
Nseta ihuenyo nke ngwa ahụ
Otu esi ebudata ngwa bọọlụ CFG
Ugbu a enweghị ike ịnweta ngwa a site na ụlọ ahịa gọọmentị. Yabụ na n'ọnọdụ dị otú ahụ mgbe ndị fan na-enweghị ike ịhụ ụdị ngwa arụ ọrụ. Ga-agarịrị webụsaịtị anyị n'ihi na ebe a na webụsaịtị anyị naanị anyị na-enye faịlụ ezigbo.
Iji hụ na nchekwa na nzuzo nke onye ọrụ, anyị goro otu ọkachamara n'ọrụ. Ọ gwụla ma ndị otu ọkachamara nyochara wee nye ntụkwasị obi na faịlụ ngwa. Anyị anaghị enye Apk n'ime ngalaba nbudata. Maka nbudata ụdị CFG Football Malaysia emelitere biko pịa njikọ dị n'okpuru.
Ọ Dị Mma Iji Wụnye Apk ahụ
Ụdị ngwa anyị na-akwado ebe a bụ naanị izizi. Tupu ịnye Apk n'ime ngalaba nbudata, anyị wụnye ngwa n'elu ekwentị dị iche iche. Mgbe wụnye ngwa anyị hụrụ na ọ ukara na ala ịwụnye.
A na-ebipụta faịlụ ngwa egwuregwu dị iche iche dị iche iche na-ekekọrịta ebe a na webụsaịtị anyị. Iji nyochaa ngwa ịntanetị enwere ike iru, biko pịa njikọ ndị a kpọtụrụ aha. Kedu ndị bụ FTS 22 ngwa ngwa na Nrọ Njikọ Nrọ Ala 2022 Apk.
Nke a bụ ohere kachasị mma maka ndị hụrụ egwuregwu n'anya ịzụta ma nweta ezigbo uru ozugbo. Cheta ndebanye aha a na-ewere dị ka iwu. Ọ bụrụ na-amasị gị faịlụ ngwa ahụ budata CFG Football App site na ebe a wee nwee ọmarịcha atụmatụ.
Categories Egwuregwu, Apps Tags CFG bọọlụ gam akporo, CFG Football Apk, Ngwa bọọlụ CFG, Nbudata ngwa bọọlụ CFG, Nweta App Mail igodo
Nbudata YanApp maka gam akporo 
By.u Apk Budata 2022 maka gam akporo [ụdị kacha ọhụrụ]
aha email Weebụsaịtị
Uso 2022 LusoGamer